Bit By Bit - Mass mmekota - 5.2 Human mgbakọ
Human mgbakọ oru ngo-a nnukwu nsogbu; agbaji ya n'ime mfe iberibe; ezite ha ka ha ọtụtụ ọrụ; na mgbe ahụ na nchịkọta na ya pụta.
Human mgbakọ oru ngo ikpokọta mgbalị nke ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na mfe Micro-aga-eme iji na-edozi nsogbu ndị dị impossibly nnukwu maka otu onye. Unu nwere ike a research nsogbu adabara ụmụ mmadụ mgbakọ ma ọ bụrụ na gị na mgbe chere: M nwere ike dozie nsogbu a ma ọ bụrụ na m nwere otu puku nnyocha na-enyere aka.
The prototypical atụ nke a bụ mmadụ mgbakọ ngo bụ Galaxy Zoo, nke na m ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu na n'okpuru. Na nke a oru ngo, ihe karịrị 100,000 afọ ofufo nkewa oyiyi nke ihe 1,000,000 ụyọkọ kpakpando na yiri ziri ezi na-na mbụ-na n'ụzọ dị nta karị-mgbalị site ọkachamara-enyocha mbara igwe. Nke a ụba ọnụ ọgụgụ nye site na uka mmekota-edu ndú ka chọpụta ihe ndị ọhụrụ banyere otú ụyọkọ kpakpando na-etolite, na ọ tụgharịa elu-adi ọhụrụ na klas nke ụyọkọ kpakpando a na-akpọ "Green peas."
Ọ bụ ezie na Galaxy Zoo nwere ike ịdị nnọọ site na-elekọta mmadụ research, e nwere n'ezie ọtụtụ ọnọdụ ebe-elekọta mmadụ na-eme nnyocha chọrọ koodu, were, ma ọ bụ labeelu oyiyi ma ọ bụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ. Mgbe ụfọdụ, a analysis nwere ike mere site na kọmputa, ma e nwere ndị ka ụdị analysis na-esi ike maka kọmputa ma dị mfe maka mmadụ. Ọ bụ ndị a mfe-for-ndị ka ike na-kọmputa Micro-aga-eme na anyị nwere ike ntughari ka mmadụ mgbakọ oru ngo.
Ọ bụghị nanị na Micro-ọrụ na Galaxy Zoo nnọọ general, na Ọdịdị nke oru ngo bụ n'ozuzu dị ka nke ọma. Galaxy Zoo, na ndị ọzọ na mmadụ mgbakọ oru ngo, na-eji a gbawara n'etiti-etinye-ikpokọta atụmatụ (Wickham 2011) , na mgbe ị na-aghọta nke a atụmatụ ị ga-enwe ike iji ya dozie nza nke nsogbu. Mbụ, a nnukwu nsogbu na-kewaa nza nke nta nsogbu chunks. Mgbe ahụ, ụmụ mmadụ na-arụ ọrụ na-etinyere na onye ọ bụla obere nsogbu mmaji, nke ibe chunks. N'ikpeazụ, na-arụpụta nke ọrụ a na-achọkwa na-emepụta a otutu mmadu kwenyere ngwọta. Nyere na ndabere, ka anyị hụ otú ahụ gbawara n'etiti-etinye-ikpokọta atụmatụ e ji mee ihe Galaxy Zoo.